Prof. U Aye Mon – Healthy Life Journal
Prof. U Aye Mon
Posts By Prof. U Aye Mon
အာရုံကြောငယ်များ၏ ပြင်ပအကာလွှာမှ ဖြစ်လာသော အဖုအကျိတ်ရောဂါ (Neurofibroma)
—–၊ ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. Neurofibroma အကြောင်း ရှင်းပြပေးပါဆရာ။ A. အာရုံကြောအမျိုးအစားတစ်မျိုး Peripheral Nerve မှာရှိတဲ့ အကျိတ်တစ်မျိုးကို Neurofibroma လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အာရုံကြောအကာက ဖြစ်တာဖြစ်ပြီး တစ်ခါတလေ...
အစာရေမျိုပြွန် ရောင်ရမ်းခြင်း (Oesophagitis)
—–၊ ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ဘာကြောင့် အစာရေမျိုပြွန် ရောင်ရမ်းရပါသလဲ ဆရာ။ A. Oesophagus လို့ခေါ်တဲ့ အစာရေမျိုပြွန်က အရှည်အားဖြင့် ၂၅ စင်တီမီတာ ရှိပါတယ်။ ဒါက အာခံတွင်းနဲ့ အစာအိမ်ကို ဆက်ပေးထားတဲ့...
ထူးထူးခြားခြား ကြုံတွေ့ရသည့် လိပ်ခေါင်းလူနာများ
—–၊ ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. ဆရာ့အတွေ့အကြုံအရ လိပ်ခေါင်းရောဂါဖြစ်တဲ့ လူနာတွေထဲက ထူးထူးခြားခြားရှိရင် ပြောပြပေးပါဦး။ A. လိပ်ခေါင်းဖြစ်ရင် ဘာမှစိုးရိမ်စရာ မလိုပါဘူး။ ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူလိုက်ရင် ကောင်းသွားတာပါပဲ။ ဒါကို သက်ဆိုင်ရာ တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ ဆရာဝန်တွေနဲ့...
—————-၊ ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ၊—————– Q. ၀မ်းမှန်မှန်သွားအောင် မြန်မာဆေး၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေသောက်တာ၊ ၀မ်းချူဘူးသုံးတာကရော ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ LaiLai(FB) A. မြန်မာဆေးတွေ၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေကို နှစ်နဲ့ချီပြီး စားလာတဲ့အခါ အူတွေက သူ့အလိုလို မညှစ်တော့ပါဘူး။ ၀မ်းသွားဖို့...
၀မ်းမှန်မှန်သွားအောင် ၀မ်းနုတ်ဆေး၊ ၀မ်းချူဘူး သုံးတာကြာတဲ့အခါ . . .
ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ၀မ်းမှန်မှန်သွားအောင် မြန်မာဆေး၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေ သောက်တာ၊ ၀မ်းချူဘူးသုံးတာကရော ကြာရင် ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ SS (FB) A. မြန်မာဆေးတွေ၊ အင်္ဂလိပ်ဆေးတွေကို နှစ်နဲ့ချီပြီး စားလာတဲ့အခါ အူတွေက သူ့အလိုလို...
ပါမောက္ခဦးအေးမွန် မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ရောဂါကြောင့်မဟုတ်ဘဲ ၀မ်းအရောင်မည်းစေတဲ့ အချက်တွေ ရှိပါသလားဆရာ။ TT (FB) A. သံဓာတ်(Iron)ပါတဲ့ ဆေးသောက်တာက ၀မ်းအရောင်ကို မည်းစေပါတယ်။ ကလီစာတွေ၊ အသည်းအမြစ်တွေ စားတာများရင်လည်း ၀မ်းမည်းတတ်ပါတယ်။ တချို့ဟင်းရွက်တွေကို များများစားရင်လည်း ၀မ်းအရောင်မည်းတတ်ပါတယ်။...
သွေးအန်နေရင် ဘယ်လိုစစ်ရမလဲ . . .
Q. သွေးအန်ပြီဆိုရင် ဖြစ်ရတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းကိုသိဖို့ ဘယ်လိုရောဂါရှာဖွေနိုင်ပါသလဲ ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး) မှ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါသည်။ A. သွေးအန်တဲ့အခါ ရောဂါရှာဖွေတာကတော့ လူနာကိုမေးမြန်းတယ်၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်၊ သွေးတွေစစ်တယ်၊ မှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်တယ် စတာတွေ လုပ်ပေးပါတယ်။ များသောအားဖြင့် သွေးအန်တာက သူ့ဘာသာ...
၀မ်းမည်းမည်းသွားစေနိုင်သည့် ရောဂါများ (Melena)
Q. ဘယ်လိုလူတွေမှာ ၀မ်းမည်းမည်းသွားတာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ ဆရာ။ ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း A. ၀မ်းမည်းမည်းသွားတာက အသက် ၂၄-၂၅ နှစ်ကနေ ၆၀-၇၀ အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလူနာတွေကို နေ့စဉ်နီးပါးတွေ့ရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးမှာ တစ်နေ့တစ်နေ့ လူနာ၁၀ယောက်လောက် ရှိပါတယ်။...
ပါမောက္ခဦးအေးမွန်(ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး ။ စအိုကွဲနာ (Anal Fissure) က ဘာကြောင့် ဖြစ်ရပါသလဲဆရာ။ ဖြေ ။ စအိုကွဲနာဖြစ်ရတဲ့ နံပါတ်တစ်အကြောင်းရင်းက ဖိအား(Pressure) များတာကြောင့်ပါ။ ၀မ်းချုပ်တဲ့အခါမှာ ၀မ်းတအားညှစ်ရတော့ Anal Canal က အမြှေးပါး...